तिलोत्तमाका किसानलाई गहुँको बिऊमा ४० प्रतिशत अनुदान – Pahilo Update
By Desk On Nov 14, 2019
तिलोत्तमा, कार्तिक २८ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा किसानलाई अनुदानमा गहुँको बिऊ वितरण सुरु भएको छ । नगरको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बिहीबारबाट ४० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बिऊ वितरण सुरु भएको हो ।
नगरपालिकाले यसअघि सूचना जारी गरी आफूलाई चाहिने गहुँको बिऊको विवरण वडा कार्यालयमा टिपाउन किसानलाई जानकारी गराएको थियो । नगरपालिकाले भृकुटी, आदित्य, विजय, एनएल, गौतम जातको उन्नत गहुँको बिऊ उपलब्ध गराएको हो ।
बिहीबार भलबारी स्थित कृषि सेवा केन्द्रमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले वडा नं. ११ मृगौलीका किसान विश्राम कुँवर र रामलगन यादवलाई एक÷एक बोरा बिउ उपलब्ध गराएर वितरण कार्य सुरु गर्नुभयो । गहुँ वितरणको व्यवस्थापन कृषि शाखा र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन समितिको सहकार्यमा भएको छ । गत वर्ष ५२ मेट्रिक टन गहुँको बिऊ वितरण गरिएकोमा यस वर्ष १४५ मेट्रिक टन माग रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले बताउनुभयो ।
नगर उप–प्रमुख जागेश्वरी चौधरीले बिऊको सदुपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउन किसानहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । गत वर्ष अनुदानमा उन्नत जातको बिऊ दिएकाले गहुँ उत्पादन २० प्रतिशतले बढेको कृषि शाखा अधिकृत जीवन आचार्यले बताउनुभयो । तिलोत्तमाको वडा नं. १३, १४, १६, १७ मा गहुँको उत्पादन बढी हुने गरेको छ । कार्यक्रम वडा नं. ७ का कार्यवाहक अध्यक्ष देविलाल पंगेनीको अध्यक्षतामा भएको हो ।
अर्घाखाँचीका निर्माण व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पठाए ज्ञापनपत्र (भिडियो सहित)
तिलोत्तमाको आनन्दवन स्वास्थ्य चौकी १५ शैयाको अस्पताल बन्ने